- ဖရိုင်းဒရစ်နောမင်း လွတ်လပ်မှုဖောင်ဒေးရှင်း( Friedrich Naumann Foundation) မြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲမှ တာဝန်ခံ Ms. Jella Fink နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 06-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 148
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ အား ဖရိုင်းဒရစ်နောမင်း လွတ်လပ်မှုဖောင်ဒေးရှင်း( Friedrich Naumann Foundation) မြန်မာနိုင်ငံ ရုံးခွဲမှ တာဝန်ခံ Ms. Jella Fink ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၆-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၀:၃၅) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခန်းတွင် လာရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 06-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 139
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား အမေရိကန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ၇-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၃:၀၀)နာရီမှ (၁၃:၄၅) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Myanmar Alliance Transparency and Accountability-MATA) အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 06-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 689
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Myanmar Alliance Transparency and Accountability-MATA) အဖွဲ့အား ၁၂-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၃:၀၀)နာရီမှ (၁၃:၃၅) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
- ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 06-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 171
မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ Legal Attache' Mr. John Schachnovsky ဦးဆောင် သောအဖွဲ့အား ၁၂-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
Showing 25 to 28 of 148 (37 Pages)